MYSTERY ZILLION 4th ANNIVERSARY — MYSTERY ZILLION
MYSTERY ZILLION 4th ANNIVERSARY
လာမယ့် April 1 ရက်နေ့ ဆိုရင် MYSTERY ZILLION လေးနှစ်ပြည့်ပါတော့မယ်။ လေးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ကို ပြုလုပ်ကျင်းပရန်အတွက် မမ်ဘာများထံမှ အကြံဉာဏ်တွေ တောင်းခံချင်ပါတယ်။ ပွဲကို ကွန်ပြူတာစာမေးပွဲပြီး သင်္ကြန်ပြီး လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အကြံဉာဏ်များပေးလိုပါက ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်ကြလဲမသိဘူး။
ပြီးတော့ မနှစ်က လုပ်တဲ့ Myanmar Egress က အဆင်ပြေလား၊
ကျွန်တော်ကတော့ Presentation ပြိုင်ပွဲ လုပ်ချင်ပါတယ်။
လူအဟောင်းတွေတက်ပြောမယ့် အစား လူအသစ်လေးတွေကို စင်ပေါ်မှာ မြင်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒီပြိုင်ပွဲလေး လုပ်ချင်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်လ အကြိုလောက် စခေါ်မယ်။ ဘယ် အီမေးကိုပို့ပေါ့။ ပြီးတော့ judge ဖွဲ့မယ်။ သူတို့ စစ်ရမယ်။ စည်းကမ်းချက်တွေကတော့ နောက်မှရေးတော့မယ်။ ပြီးရင် မကြေငြာသေးဘူး Nomination ဖြစ်တဲ့ ငါးယောက်ကိုပဲ ကြေငြာမယ်။ ပွဲရောက်တဲ့နေ့မှ ပထမ ဒုတိယ တတိယ ကြေငြာမယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ကိုတက်ပြောခိုင်းမယ်။ အဲဒီလိုမျိုးစဉ်းစားထားတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်သာ....
first apirl က apirl fool ဟုတ်.. စနေတာတော့ဟုတ်ပါဘူဟုတ်
April 1st က Friday ပါ ...
ပွဲကို ကွန်ပျူတာ စာမေးပွဲပြီးတဲ့နေ့လုပ်တာကောင်းပါတယ်။ ကျောင်းက စိတ်၀င်စားတဲ့သူတွေလည်းတတ်လို့ရတာပေ့ါ။ ကွန်ပျူတာက Mid-Term ကို April 1st Week ဖြေရတာများတယ်လေ။ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့ထဲက တစ်ယောက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် တတ်ပြောစေချင်တယ်.. :biggrin::biggrin:
ကွန်ပျူတာစာမေးပွဲတွေ ပြီးရင် လုပ်တာကောင်းပါတယ်.....Gipsy ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ထောက်ခံပါတယ်...လူသစ်တွေ ကို ကြိုဆိုကျတာပေါ့။:cool:
ဒီနှစ်တော့ networking ပိုင်းလေးတွေ ပြောမယ့်သူတွေရှိရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မနှစ်က အဲ့ဒီအပိုင်းမှာပြောတဲ့သူ မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။ အနော့် ကို ပြောခိုင်းလဲ မပြောတတ်ဘူး
ဖြစ်နိုင်ရင်ပြောပါတယ် cloud computing လိုမျိုး (အနော် ဘာမှန်းကိုမသိလို့) ပေါ့
ဒါလေးတစ်ခုတော့ တောင်းဆိုပါရစေနော်။ ။
anniversary ကိုဘယ်မှာ လုပ်မှာ ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ တက်ရောက်ဖို့ ဘာတွေလို အပ်လဲ ဆိုတာကို ပေ့ါ။ ကျွန်တော့်gmail ကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်
UCSY ကိုတော်တော်ဦးစားပေးတယ်နော်။ ... ကောင်းပါတယ်။ စာမေးပွဲတွေပြီးမှလုပ်တော့လူပိုများတာပေါ့
ဒါဆိုရင်တော့ ကိုကြီး T.K တို့ ကိုကြီး Tsuna lade တို့ ပြောကြပေါ့...နော...အကို တို့ က UCSY ဘိုးအေကြီးတွေ ဆိုတော့....နော
OM Dear Forbidden Blueray
What do you means မောင်မောင်လိပ် ?
စာမေးပွဲပြီးမှ လုပ်မယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဒီမှာကြားနေရတာက စာမေးပွဲက သင်္ကြန်ပြီးမှလို့ကြားနေတယ် ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး ပြီးတော့နောက်တခုက သမီးတို့ကနယ်ကဆိုတော့ တက်ရောက်ဖို့ ခဲယဉ်းလိုက်မယ် ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတက်ရောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ် ဖြစ်နိုင်ရင် မနှစ်က ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ ဘာအစီအစဉ်တွေပါလဲဆိုတာ သေချာသိချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် :redface:
ရောက်အောင်လာချင်တဲ့သူတွေကတော့ ရောက်အောင်လာမှာပါဘဲ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
အရင်နှစ်က အစီအစဉ်တွေကိုလဲ ကြိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် MZ Logo တစ်ခုထဲရတာရယ် သေးသေးလေး
ဖြစ်နေတာရယ်တော့ ဟီး သိပ်မကြိုက်ဘူး
MZ Logo ကို သော့ချိတ်တို့ဘာတို့လုပ်ပေးပါလား အဆင်ပြေရင်ပေါ့
မပြေတော့လဲ Logo Sticker ကို အကြီးတစ်ခု အသေးတစ်ခု လိုချင်ပါတယ်
သြော် ပြပွဲမှာ ဘာမှမကျွေးလဲ ကြေနပ်ပါတယ်၊ အရင်လိုဘဲ စိတ်၀င်စားစရာ စာစောင်ရယ်
ပေးမယ်နည်းပညာ မှန်မျှ ယူပါမယ်။
ဘယ်မှာ လုပ်လုပ်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် လူညီတယ်လို့ထင်လို့ပါ
မနှစ်တုန်းကတော့ web အကြောင်းတွေ ပြောတာ များသွားတယ်။ ဖိတ်လို့ရတဲ့ လူတွေကလည်း web သမားတွေ များသွားတာလည်း ပါတာပေါ့။ ဒီနှစ် ဘယ်လို လုပ်ချင်လဲ။ လူ ကတော့ အများကြီး မမှန်းထားပါဘူး။ အများဆုံး ၅၀ ပေါ့။ ဒီနှစ်လဲ egress မှာပဲ လုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
အဓိက သိချင်တာက ဘာလုပ်ချင်လဲ ?
လက်ရှိ Member တွေထဲက ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ creation တွေ ရှိလား ?
ဥပမာ ။။ ကျွန်တော်ဆို ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Nifty framework အကြောင်းပြောချင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Ornagai အကြောင်းနဲ့ Installation တွေကို ပြောပြချင်တယ်။
အဲလိုမျိုး member တွေထဲက own creation တွေကို ချပြစရာတွေ ရှိသလား ?
If we wait , we have to wait till may